အလင်္ကာ: ပညာသုံးတန် စုံရမည်
“ရုပ်ကိုလည်းပြင်၊ စိတ်လည်းပြင်၊ ပြင်ချင်တိုင်းလှ၊ ပြင်တိုင်းလှ ၊ သုခဘုံသို့၊ တိုင်လိမ့်မည်” ဟူသော အလင်္ကာလေးကို သတိရပြီး မိမိတို့ဘ၀ကို အလှပြင်ဖို့။ ထိုနောက် အလှပြင်တဲ့အရာများကို မှန်ကန်စွာရွေးချင်နိုင်ဖို့ရန်။ မိမိမျက်နှာအနေအထားအတိုင်း မှန်မှာပေါ်သလို ယခုဘ၀ မိမိရွေးချယ်ခြယ်သသော ကောင်းမှု-ကုသိုလ်၊ မကောင်းမှု-အကုသိုလ်တရားက နောက်ဘ၀မှာ အကျိုးပြန်ခံစားရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် သတိထားမိအောင် ဒီ“အလင်္ကာ” ကို တန်းဆာဆင် ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်သည်။
(သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပြန်လာပြီးနောက် ဇာတိမြို့မှာ တစ်နှစ်ခွဲလောက် အနားယူပြီး။ ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ခွင့် ထပ်မံကြုံလာသဖြင့် အင်တာနက်နှင့် တစ်ဖန် မိတ်ဆွေဖြစ်လာသောအခါ စာဖတ်သူများနှင့် ကံကြမ္မာရဟတ် တစ်ပါတ် ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။ ပထမဆုံး ပိုစ့်လေးက သီတဂူဆရာတော်ရဲ့ မိန့်စကား အပိုင်းအစလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါအုံး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။)
လူတို့၏ ဘ၀တန်ဖိုးသည် ပညာ၊ လူတို့၏ မျက်လုံးဟူသည် ပညာ၊ လူတို့၏ အသက်ဟူသည် ပညာ၊ ဘ၀အရင်းအနှီးသည် ပညာ၊ ဘ၀သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြောင်းသည် ပညာ၊ ဘ၀အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ကြောင်းသည် ပညာ၊ ဘ၀ပန်းတိုင်သို့ ပို့ကြောင်းသည် ပညာ၊ ဘ၀၏သော့ချက်သည် ပညာ၊ နိဗ္ဗာန်တံခါး၏ သော့ချက်သည် ပညာ စသည်စသည်ဖြင့် ပညာ၏တန်ဘိုးရှိပုံ၊ အသုံးဝင်ပုံ၊ လိုအပ်ပုံတို့ကို ပညာရှိတို့ အမျိုးမျိုး ဆိုကြကုန်၏။
“ကထံသု လဘတေ ပညံ” ထိုပညာကို အဘယ်နည်းဖြင့် ရနိုင်ပါမည်နည်း-ဟု အာဠာဝကဘီလူးက မေးသည်ကို “သုဿုသံ လဘတေ ပညံ” ကောင်းမွန်စွာ သင်ယူခြင်း၊ ဆရာသင်ကြားပေးသည်ကို ကောင်းစွာ မှတ်သားနားထောင်ခြင်းဖြင့် ပညာကို ရနိုင်၏-ဟု မြတ်စွာဘုရား ဖြေကြားတော်မူ၏။
ဤ၌ ပညာတတ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် ဆရာနှင့်ပညာကို ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါ၊ မမေ့မလျှော့ မှတ်သားခြင်း သတိ၊ သင်ကြားခြင်းတို့ကို စိစစ်စူးစမ်းသည့် “၀ိစက္ခဏာ”ဟူသော အရည်အချင်း သုံးပါးတို့သည် “သုဿုသာ”၏ ပြီးမြောက်ကြောင်း အားကောင်းသော အထောက်အပံ့တို့ ဖြစ်ကုန်၏။
သဒ္ဓါကောင်းသော တပည့်သည် ဆရာကို ဆည်းကပ်လုပ်ကျွေး၏။ ချဉ်းကပ်လုပ်ကြွေးနိုင်သော တပည့်သည် ဆရာထံမှ သင်ပြပြောဆိုသည်တို့ကို နားစိုက်၏။ နားစွင့်၏။ အစဉ်သဖြင့် နားစွင့် မျက်စိဖွင့်ထားသော တပည့်သည် ပညာရ၏။ ဤသည်ကိုပင် “သုဿုသာ ဘလတေ ပညံ”ဟု ဟောတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ပညာရခြင်း၏ အခြေခံတို့ကို ကြည့်သော် ဆရာပြောသမျှ နားကြားသမျှ မျက်စိမြင်သမျှ ဖတ်ထားသမျှ မှတ်ထားသမျှကို “ပညာ”ဟု ဆို၏။ ဤကား “သုတမယပညာ”မျှသာတည်း။ မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ သင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြင့် ပြီးသော ပညာအဆင့်ဆင့်ကို ပါရဂူဘွဲ့ပင် ရထားစေကာမူ ပထမတန်းပညာ (သို့) မူလတန်းပညာဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဓမ္မာစရိယ M.A., Ph.D ဘွဲ့ရလျှင် တစ်တန်းတော့ အောင်မြင်ခဲ့လေပြီ။ ဆရာနှင့် စာအုပ်၊ ကျောင်းနှင့်စာကြည့်တိုက်တို့မှာ သင်ကြားခဲ့ပြီးသော “သုတမယပညာ”ကို နှလုံးသား၌ ထည့်၍ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် အလေးအနက် အပြန်အလှန် စိစစ် သုံးသပ် ခြင်ဆင်အပ်ပေသည်။ ဥပမာ “သုဿုသာ လဘတေ ပညံ” ဟူသော ဘုရားစကားတော်ကို အလေးအနက် ဆင်ခြင်ရာ၌ “သဒ္ဓါဇာတော ဥပသင်္ကမတိ” ယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်မှ ချဉ်းကပ်၏။ “ဥပသင်္ကမန္တော ပယိရုပါသတိ” ချဉ်းကပ်မိမှ လုပ်ကျွေးပြုစုခွင့်ရ၏။ ချဉ်းကပ်နိုင် ပြုစုလုပ်ကျွေးနိုင်မှ ဆရာပြောသမျှ နားထောင်ခွင့်ရ၏။ နားထောင်ခွင့်ရမှ အရည်အချင်း တိုးတက်၏။ ဤသို့လျှင် စာတစ်လုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ထောက်စုံမှ တွေးတောဆင်ခြင် သုံးသပ်၍ ကိုယ်ပိုင်အတွေးဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးလာသော ပညာမျိုးကို “စိန္တာမယပညာ”ဟု ခေါ်သည်။ စာသင်သားတို့သည် ဆရာ့အဆို စာအုပ်အရေးဖြင့် ပညာကို အပြီးသတ်မထားဘဲ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးဖြင့် လေးနက်စွာ ချဲ့ထွင်တတ်ရမည်။ အတွေးအကြံကောင်းသော စာသင်သားသည် ပညာ ဒုတိယတန်းကို အောင်မြင်သည် မည်၏။
တတိယတန်း ပညာကား- ဘာဝနာမယပညာ ဖြစ်၏။ ဘာဝနာမယပညာ- ဟူသည် သင်ထားရုံဖြင့် မပြီး၊ အတွေးအကြံဖြင့် မပြီး၊ ကိုယ်တွေ့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်၌ အသုံးချ အလုပ်လုပ်၍ရသော ပညာဖြစ်သည်။ သင်ကြားထားသောပညာ ကြံစည်ထားသောပညာတို့ကို လူ့ဘ၀တစ်ခုလုံး၌ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် အသုံးချ ကျင့်သုံးရပေမည်။ လူ့လောက လူ့ဘ၀၌ အသုံးမချရသော ပညာနှင့် ပညာရှင်တို့သည် လူ့လောက၏ကျေးဇူးရှင်များ တကယ်စင်စစ် ဖြစ်မလာနိုင်သေးပေ။ လောကတ္ထစရိယ အလို့ငှါ မိမိပညာကို အသုံးချလိုသော ပညာသင် ပညာရှင်တို့သည မိမိတို့၏ပညာကို -
1. The wisdom acquired in the level of the learning.
2. The wisdom acquired in the level of the thinking.
ဟူသော နှစ်ဆင့်မျှဖြင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် မနေကြဘဲ
3. The wisdom acquired in the level of the practical experience.
ဤ တတိယဆင့် ရောက်သောပညာ သည်သာလျှင် ပညာသင်နှင့် ပညာတို့ တစ်စပ်တည်း ဖြစ်သဖြင့် ထိုသူ ပညာတတ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် သစ္စာတရားကို (ဘ၀၏အဖြေမှန်) ရှာဖွေရာ၌ မြတ်ဗုဒ္ဓက- “အတက္ကာဝစရာ ပဏ္ဍိတဝေဒနီယာ”ဟု ဟောတော်မူလေသည်။
ထိုကြောင့် ပညာသင်စာသင်သား အများတို့သည် ပညာဆို သုံးတန်အောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
(က) သင်ပညာ (သုတ)
(ခ) ကြံပညာ (စိန္တာ)
(ဂ) ကိုယ်တွေ့ပညာ (ဘာဝနာ)။
ယထာပိ ဘိက္ခု ဘိက္ခန္တော၊ ဟီနမုက္ကဋ္ဌမဇ္ဈိမေ။
ကုလာနိ န ၀ိဝေဇ္ဇေန္တော၊ ဧ၀ံ လဘတိ ယာပနံ။
တထေ၀ တွံ သဗ္ဗကာလံ၊ ပရိပုစ္ဆံ ဗုဓံ ဇနံ။
ပညာပါရမိတံ ဂန္တွာ၊ သဗ္ဗောဓိံ ပါပုဏိဿတိ။
အဓိပ္ပါယ်။ ။ ရဟန်းမှန်က ဆွမ်း(အလှူဝတ္ထု)နှင့် တကာ၊ တကာမတွေကို အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်မရွေးဘဲ (အလှူခံမယ်) ဆွမ်းခံမယ်ဆိုရင် မျှတအောင်တော့ ရနိုင်သလို…..
အမြဲတမ်း ပညာကို ရှာမှီးသူသည် ပညာရှိထံ ချဉ်းကပ် မေးမြန်း သင်ယူမယ်ဆိုရင် ပညာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံလာကာ (ပညာပါရမီ) နောက်ဆုံး ပန်ဆင်တဲ့ ဗောဓိဆုကို ရမှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by အလင်္ကာ at 5:36 AM
Mary Grace July 16, 2012 at 8:01 AM
` ကမ္မဿကာ, လူဗိုလ်ပါတို့၊
eurocity casino | Titan poker | Blackjack Free | ONLINE CASINO UK | FOOTBALL MANAGER
Myanmar in Singapore - Please, forward this and invite Myanmar in Singapore.
Picasa Web Albums - dhamma - ဘုံဘ၀
Famous Original A.L.I.C.E. Chat Bot - Showcase Edition
mmshare - Comments
Educational English Courses at Language Schools - Englishjet
To do good deeds,
ကုသိုလ် ဥစ္စာ ကျန်ခန့်သာ၍
ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ အနှစ်ရှာ၊ ပြုပါ“ဒါန”မှတ်၊
မိမိခန္ဒာ၊ အနှစ်ရှာ၊ စောင့်ပါ“သီလ”မှတ်။
အသက်ဇီဝါ၊ အနှစ်ရှာ၊ “ဘာဝနာ”ဟုမှတ်။
လှူပါ စောင့်ပါ၊ ပွါးများပါ၊ သုံးဖြာ“အနှစ်”မှတ်။
မေတ္တာကိုယ်စီ လက်တွဲညီ ပန်းတိုင်သို့ရည် ဆက်လက်ချီ
excels all other gifts
but everyday isalucky day